'Oge akwukwo' oge 15, ihe nkiri 5 Recap - Ozi
Atụmatụ & Ndụmọdụ Nddị Ahụike Ejiji Agbamakwụkwọ Ime Ụlọ Ibu Ibu Anu Ulo Jụọ Ọkachamara Ejiji News Nri
'The Bachelorette' Season 15, Episode 5 Recap: Luk-Ness Monster
Ọ karịala otu izu kemgbe Ndị Bachelorette ikuku na ABC. (Daalụ nke ukwuu, ngwụcha NBA.) Ma ugbu a, usoro mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-ewu ewu wepụtara ebe anyị kwụsịrị, ya na Hannah Brown wepụrụ Luk P. na Luke S. na mbọ iji ruo ala nke esemokwu ha.
Nke a bụ ihe gbadara n'oge 15, oge ise nke Ndị Bachelorette .
Luke P. Onyeka vs Luke S.
Ihe omume ahụ meghere na Brown nọ ọdụ na Luke P. na Luke S. Ebe ọ bụ na ọ na-anwa ịnọpụ iche, ọ chọrọ ka ha gwa ibe ha okwu-ọ bụghị ya. Ya mere, Luke S. na-akpọ Luke P. ka ọ bụrụ onye ụgha. Mgbe mkparịta ụka ahụ rịrị elu ruo n'ókè nke Luke S. na-eti mkpu are bụ onye ụgha! na elu nke ngụgụ ya, Brown na-agọpụ onwe ya, na-ahapụ ndị Lukes ka ọ pụọ.
Mgbe o boro ibe ya ebubo ụgha (ọzọ), Luke P. kwetara na ya ghọtara nkụda mmụọ nke Luk, na-eche na ya enweghị azụmahịa na-ekwu maka ebumnuche ya na Brown. Naanị oge ahụ, Chris Harrison kwụsịrị mkparịta ụka ha ma kpughee na oge eruola maka ememe rose. Dun dun dun.
esi belata ntutu ịda n'ihi dandruff
Brown dị obere oge inyefe mbido mbụ mgbe Luke S. jụrụ ikwu okwu na nzuzo. Ọ rịọ mgbaghara maka ịkpatara gị ihe mgbu ọ bụla ma gbaa ya ume ka ọ meghee anya ya tupu ịhapụ ihe nkiri ahụ.
Mgbe Brown laghachiri n'òtù ahụ, ọ na-enyefe onye ọ bụla Roses ma John Paul Jones na Matteo.
Na mkparịta ụka ya na ndị na-emepụta ihe, Brown na-agwa elephant n'ime ụlọ ahụ, na-asị, Luke P. ka nọ ebe a n'ihi na obi m chọrọ ka ọ nọrọ ebe a. Isi m achoghi ka ya bia ebe a. * Kwuo ume *
Mike Ejeagha''s Otu-na-Otu Datebọchị
N’echi ya, Brown na ụmụ nwoke iri na abụọ fọdụrụ na-aga Inverness, Scotland, ebe Mike dere ụbọchị mbụ. Oge a, ndị Bachelorette na-akpọrọ ya ka ha nyochaa ebe ahụ, Mike dị ka nwatakịrị nọ n'ụlọ ahịa swiiti.
Mba, n'ezie. Ọ bụghị naanị na ọ na-amụmụ ọnụ ọchị, dị ka, oge niile, mana ọ na-erikwa swiiti Black Death dị ka mkpokọta mmeri. (Mgbe na Scotland…)
M hụrụ ndụ n'anya ugbu a, Mike na-ekwu. Ọ bụ ụbọchị zuru oke ịmalite ịhụ n'anya.
Na nri abalị, Brown na-aga obere okwu ọ na-ekwukarị, na-arịọ ya ka ọ mata oge ọ kachasị amasị ya ụbọchị (aka ụlọ ahịa swiiti). Ọ bụ ezie na Mike abụghị onye imeghe mgbe obere oge dị otú a, ọ na-enwe mmetụta siri ike banyere Brown. N'ezie, ọ dị njikere ịdata n'otu ikpere n'ime izu ole na ole dị mkpirikpi.
Brown na-alaghachi ihu ọma site n'inye ya rose.
Ka ọ dị ugbu a, ndị ọzọ na-asọ mpi ka na-ewe iwe na Luke P. n'ihi na ọ bụghị ezigbo Brown. N’ịgbalị ime ka ihe dị mma, ọtụtụ ndị na-achọ ịlụ nwanyị — gụnyere Jed — mere ka ọ bụrụ ozi ha igosipụta ezigbo agba nke Luk P.
Nke a bụ maka ịhapụ Luk-ness anụ ọhịa ka ọ banye n'ime obi ya wee mebie ya, Jed kwuru.
N'ihe ziri ezi, kaadị ụbọchị otu ahụ rutere, ọ ga-ezigara Connor, Devin, Dustin, Dylan, Garrett, Grant, Jed, Kevin, Peter na Tyler.
Mgbe Brown na-akpọrọ ha gaa ahịhịa ahịhịa, ọ na-ewebata ha na ụwa a ma ama agha reenactor, onye na-enye ha kilts tupu ọzụzụ ha n'usoro usoro, akpọrọ The Bachelorette Highland Games.
Ọ bụghị nha akpa gị, ọ bụ otu ị si akpọ ya, ka Brown kwuru.
Mgbe emechara oriri na nkwari AF ugboro ugboro. Ọtụtụ ndị na-asọ mpi na-esusu Brown ọnụ ma gwa ya na ha ga-ahụ ọdịnihu dị mma. Barf.
Na ngwụsị nke abalị, Brown na-enye rose ahụ Jed, ọ nweghịkwa onye juru ya anya.
Luke P.''s Otu-Otu-Otu -bọchị
Luke P. na-ezute Brown ma gbanye amara ozugbo, na-atụba ahịrị otu esi eche ya ijide aka ya mgbe ọ na-agagharị n'ubi ifuru. Um, Ọ D? MMA?
Mgbe Luke P. jụrụ ma ọ nọ na otu ibe, Brown na-ekpughe na ọ na-echegbu onwe ya na ụmụ nwoke ndị ọzọ nwere mmetụta siri ike banyere ya. Luk na-anwa ime ka obi sie ya ike, na-ekwu na ndị ọzọ na-asọ mpi bịakwutere ya n'oge okpomọkụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, nke a na-ebute nsogbu dị ukwuu maka Brown, ebe ọ bụ na ọ chọrọ ka ya na onye bụ onye ndị mmadụ. Mgbe Brown ghọtara na enweghị mmetụta ọ bụla n'azụ ihe ọ na-agwa ya, ọ na-aga ije ma kọọrọ ndị na-emepụta ihe, na-asị, Amaghị m ihe m ga-eme.
Brown laghachi wee gwa Luke P. na ọ dị ya ka ọ maghị ihe ọ bụla gbasara ya. Ọ na-arịọ mgbaghara maka inye ya ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịghagharị azịza, mana ọ nweghị ya.
Amaghi m ihe m choro. Ka anyị gaa leba anya na nnukwu ụlọ a, Brown kwuru tupu ọ gaa n'ihu na ụbọchị ha.
Mgbe e mesịrị n'abalị ahụ, esemokwu ahụ adịla oke oge mgbe di na nwunye ahụ nọdụrụ ala maka nri abalị. Ọ bụ ezie na Luke P. na-agba mbọ igwu onwe ya n'olulu, o kwetara na ọ na-adị ya ka ọghọm n'ihi na mmadụ niile na-agba ya egbe kemgbe ụbọchị mbụ.
Brown gbara ọkụ ozugbo, na-ekwu, achọghị m ịlụ di na-eche na ọ bụ onye ọ bụla ọzọ kpatara ya na enweghị ike ịnwe ya.
Na ihe ijuanya nke ihe omume, ọ na-agbakwụnye, enweghị m ike inye gị ịrị elu a.
Ọ bụ ihe dị na oge damn. Ndị Bachelorette laghachi na ABC na Mọnde na-esote, June 17, na 8 pm
Njikọ: Ndi Di na Nwunye ‘Bachelor’ Ga-ada?
Categories Ahụike Teknụzụ Ime Ụlọ
eme n'ụlọ iji belata abụba afọ
ndumodu di ndu nke na-enwu gbaa
ndakọrịta kacha mma maka nwanyị kansa
esi belata ntutu ịda n'ụzọ nkịtị
esi ntutu daa nkwụsị
ọgwụgwọ kacha mma n'ụlọ maka ntutu isi